Dragon kunye Horse Uthando Ukuhambelana: Ulwalamano olunentsingiselo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Dragon kunye Horse Uthando Ukuhambelana: Ulwalamano olunentsingiselo
Dragon kunye Horse Uthando Ukuhambelana: Ulwalamano olunentsingiselo
Ubudlelwane phakathi kweNyoka kunye neHashe benzeka ngesantya esiphezulu kuba bobabini aba bantu banamandla amangalisayo ezesondo kunye nemagnethi ebenza batsaleleke omnye komnye.
Baza kuba mnandi kunye kwaye kwangaxeshanye bonwabele iqhina elisondeleyo, ikakhulu kuba bobabini banomdla wokuphuma kwaye bobabini banezibheno ezininzi zesini. Abantu baya kumonela nje esi sibini kuba bahlala bonwabile kwaye babonakala bonwabile kunye.
Iikhrayitheriya IsiDanga sokuhambelana kweDragoni kunye nehashe
Inamba kunye nehashe bahlala behleka kwaye bethetha ngezinto ezikrelekrele xa bephumile kwisidlo sangokuhlwa okanye kwindibano yasekuhlaleni. Ngelixa ihashe linika umbono wokuba uqinisekile njenge Dragon, abantu abakulo mqondiso bafuna ukuqinisekiswa rhoqo.
Abathandi ababini abanomtsalane
Inamba kunye nehashe ziya kuhlala zikhuthazana kwaye zibe nobomi obusebenzayo xa kunye. Kubonakala ngathi zinxibelelana ngokulula kuba zikrelekrele ngokulinganayo, zinamanqanaba afanayo amandla, kwaye ziyakonwabela ukuphuma nokuzonwabisa.
Akukho namnye kubo ofuna ukuhlala, ngenxa yoko banokuba nengxaki xa behlala kunye okanye ngaphambi kokuba batshate. Nangona kunjalo, inyani yokuba bonwabile kunye kwaye bonwabile kunye inokubanceda ukuba bamelane njengesibini ixesha elide.
Ihashe kunye neDragoni bobuntu obufanayo kuba bobabini bayathandana, banenkathalo kwaye banomdla. Igongqongqo liya kuhlala liyithanda indlela iHashe elibakhathalele ngayo abanye kwaye lomelele, ngelixa eli lokugqibela linomdla omkhulu kwindlela elinomdla nelinomdla ngayo iqabane labo.
Ihashe liyikhathalele kakuhle imali kwaye iDrako ilungile kakhulu ekwenzeni oko, nto leyo ethetha ukuba eyokuqala iyakuhlala ixabisa eyesibini ngokuba ngusomashishini olungileyo.
Xa bechitha ubomi babo kunye, inamba kunye nehashe liza kuhlala lixakekile kwaye lingahlali ekhaya kakhulu. Kubalulekile ukuba bobabini banemisebenzi elungileyo kwaye bonwabele ukuzonwabisa kwabo kuba zizidalwa ezizimeleyo ezifuna iintlobo ngeentlobo.
Inamba iya kuhlala ifuna ukuthatha iiprojekthi ezintsha kwaye iyamangalisa, njengeHashe. Nangona kunjalo, iHashe liyalazi ixesha lokuthatha umngcipheko kwaye xa kungenjalo, ukuze alincede inyoka lingoyiki.
I-sagittarius indoda emva kokuqhekeka
Ukuba aba babini bayavana kakhulu njengesibini, banamathuba onke okuba kunye ubomi babo bonke kuba banezinto ezininzi ezifanayo kwaye banokuthandana kakhulu.
Ngapha koko, iDrako kunye neHashe liyathandana njengoko eyokugqibela ibona inkanuko kwiNyoka kwaye eyokugqibela iyayixabisa indlela eyomelele ngayo neyokuqala.
Ukuba nabantu abaninzi abathandayo, iinyoka kunye neHashe azikhe zibenomona, yenye yeendlela eziluncedo kubo njengesibini. Ewe kunokwenzeka ukuba babe neemoods kwaye baphikisane, kodwa konke konke, baya kuhlala bonwabile kwaye bonwabele ubomi obonwabisayo ekuhlaleni xa bekunye.
I-Horoscope yaseTshayina ithi ezi zimbini ziyahambelana kuba ziyafana kwaye akukho namnye kuzo owalayo umceli mngeni.
Umfazi weDragoni uyayazi indlela anomdla ngayo kunye nenyaniso yokuba amadoda ayamthanda. Ihashe lithanda umceli mngeni, ke amadoda akumqondiso awunako ukuthi hayi kwinenekazi elijika iintloko naphina apho liya khona.
Uya kumrhola ngobusuku bokudanisa kunye neeyure ezichithwe esenza imisebenzi eyonwabisayo, ke uya kucinga ukuba yindoda egqibeleleyo kuye. Ukubuya, umfazi waseHashe uya kuyithanda inyani yokuba indoda enguDrako inamandla kwaye inokutsala nabani na.
Ngapha koko, uyayithanda indlela anesisa ngayo kuzo zonke izihlobo kunye nosapho. Uya kumnika izipho ezininzi ezibizayo kuba uyinkcitho kwaye uhlala kufuneka ephethe okanye anikele ngeyona nto intle.
Akusayi kubakho ngxaki ukuba iHashe kunye neDragoni zithandane njengoko le yokugqibela iyayithanda indlela ezimisele ngayo eyokuqala kunye nenye indlela ejikeleze yona, iHashe liyayithanda inyoka ngokuba likrelekrele.
Kuba akukho namnye kubo onengqondo ethetha ngeemvakalelo, ubudlelwane babo buya kuba nothando kunye nokunyaniseka.
Ngokucacileyo, i-Dragon ayizukuphumelela ekulawuleni iHashe, elizimeleyo kakhulu. Kwakhona, le yokugqibela iya kuqaphela ukuba inyoka enesibindi ayinakoyikisa.
leo umfazi kwaye pisces umtshato womntu
Baza kulwa ngamandla, ke kubalulekile ukuba babeke imida xa bebandakanyeka kubudlelwane kunye kuba ukuba bangalwa ngalo lonke ixesha, inkqubela kumanyano lwabo ayinakwenzeka.
Xa kuziwa kwisini, ezi zimbini zinekhemistri enkulu kwaye zinokuhlala ixesha elide kakhulu zenza uthando. Akukho namnye kubo ocinga ukuba umfazi omnye utshatile, ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba baya kuba kunye kwaye kwangaxeshanye bathandane nabanye abantu.
Le meko inokuhlala iminyaka kwaye nabo abanangxaki ngobudlelwane obude.
Ukuba indoda iliHashe kwaye umfazi uliNyoka, unokufuna ukuyenza mbuna, engayi kuba yinto ayithandayo, nokuba ifuna ukubonwa njengomphathi wobudlelwane kwaye inokwenza nantoni na oku kwenzekayo.
Ukuba bobabini baya kufunda ukoyisa ubunzima babo, unxibelelwano lwabo lunamathuba onke okuphumelela. Ukuba indoda iyiDragoni kwaye ngumfazi iHashe, baya kuqala izinto ngothakazelelo olukhulu, kodwa apha endleleni, angacinga ukuba ufuna kakhulu ukuba i-ego yakhe iphulwe, nto leyo eya kumenza angaziphathi kakuhle kwaye ade ayongamele.
Ukuba baya kuyigqitha le nto, izinto phakathi kwabo zinokuvela zihle kakhulu. Ngelixa bekhathalelane, banokulibala ukuba banomdla ngokwahlukileyo kwaye ke, kufuneka banike ingqalelo kwinto abayidingayo omnye komnye.
Kuqhelekile ukuba zombini i-Dragon kunye neHashe zijolise kubo kuphela, ke ulwabelwano oluncinci kunye nokhathalelo luyacetyiswa kakhulu ukuba ubudlelwane babo buphumelele.
Inye kuphela into enokutshabalalisa ubudlelwane phakathi kweNyoka kunye neHashe inxulumene nenyaniso yokuba bobabini aba bantu bathanda ukugxila kubo kakhulu.
Indoda yeHashe iya kuhlala icinga ngezinto eziphambili ngokubaluleka ngaphambi kokuba igqale inenekazi layo. Igongqongqo lahlukile, kungoko ii-egos zezi zinto zimbini zinokuba kakhulu kwindlela yolonwabo lwabo kunye.
Ukuba ngaba baphumelele njengesibini, kufuneka benze ulungelelwaniso kwaye baqonde ukuba banokuncedana ngokwenene. Inyani yokuba inyoka ingumphathi ayisoze ibancede ubudlelwane babo nangayiphi na indlela, kwaye ukunganyanzeleki kweHashe.
Njengokuba kunjalo, iHashe linokungxanyiswa kangangokuba iDrako ayisayiqondi into evela kuye. Xa icaphukile, inyoka iqala ukutyhala, ke iHashe lingaqala ukuziva lingahlonitshwa.
Isisombululo kwaba babini kwimeko enjalo kukuthetha izinto. Okukhona ihashe liya kuqonda ukuba inyoka ayithandi ukwenza izigqibo ekubalekeni, amathuba angcono okuba bonwabe kunye.
Ukunxibelelana nabanye kunokunceda inamba kunye nehashe ngokwenza kwabo uthando kuba baya kuvavanya ukuba bahambelana kangakanani ngokwembono yesondo.
Ukuba indoda ekolu lwalamano yiDragoni, umfazi waseHashe unokufuna ukujongana neendlela zakhe zokudlala ngothando kwaye banokuphikisana kakhulu ngalo mbandela. Igongqongqo nehashe kufuneka bahloniphane ukuba bafuna ukuvumelana kubudlelwane babo.
Ukuba iHashe liya kuthatha isigqibo sokubuyisa inyoka ngengqekembe enye kwaye iya kuba ngudlalani, le yokugqibela ikhankanyiwe iya kuphambana. Ke ngoko, intlonipho kunye nonxibelelwano kubalulekile kulwalamano phakathi kwaba babini ukusebenza.
Igongqongqo kunye neHashe kunokuba sisibini esonwabisayo, ngakumbi ngexesha labo lokuqala. Nangona kunjalo, banamathuba onke okuchitha uthando lwabo kuba banokungena kwisiqhelo kwaye balibale konke malunga nokwenza omnye nomnye azive ekhethekileyo.
Ngapha koko, inyoka yaziwa ngokuba ngumsebenzi, ngenxa yoko inokuchitha ixesha elininzi emsebenzini ilibale konke malunga neHashe. Enye into enokubakhathaza kunxibelelwano lwabo kukuba bobabini bazingca.
Aba babini bafanele bacinge ukuba uthando lumalunga nokwabelana kwaye hayi ukulandela kuphela iimfuno zabo. Ukungazi into efunwa ngomnye kunokubenza bahlukane kwaye bangaze baphinde babonane.
Ukuhambelana kothando lwehashe: Ukusuka ku-A kuye ku-Z
loluphi uphawu lwangoSeptemba 28
Ukwahlukana noMfazi weTaurus: Yonke into ekufuneka uyazi
Ukuhambelana kobuhlobo beLibra kunye neScorpio
indoda y virgo kunye nelibra yabasetyhini
ungazi njani ukuba umfana gemini uyakuthanda
umfazi we-sagittarius kunye nendoda ye-sagittarius
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha 7